မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ - Home Eye Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ - ပင်မစာမျက်နှာမျက်လုံး
မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ - ပင်မစာမျက်နှာမျက်လုံး APK ကို
သင်အမြဲအိမ်မှာထားခဲ့ပါကြောင်းအဟောင်းဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုရှိပါသလား ယခုတွင်သင်သည်ကောငျးစှာအသုံးပွုဖို့ကထည့်ထားနိုင်ပါတယ်တဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ်! အဆိုပါလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုမူလစာမျက်နှာမျက်လုံး app ကိုလုံခြုံရေးကင်မရာသို့သင့်မိုဘိုင်း device ကို turn နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ IP ကိုကင်မရာများသို့မဟုတ် DVR စနစ်များများအတွက်တစ်ပြားမှပေးချေရန်မလိုဘဲစစ်မှန်သောဗီဒီယိုအားစောင့်ကြည့်သည့်စနစ်အရ။ သင်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာထားပြီးသင်၏လက်၌တည်ရှိ၏။ တစ်ဦး Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးကဖုန်းကို။
မူလစာမျက်နှာမျက်လုံးလှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံများနှင့် detect လုပ်ဖို့သင့်မိုဘိုင်း device ကိုရဲ့ကင်မရာကိုအသုံးပြုသည်။ မူလစာမျက်နှာမျက်လုံး Start စောင့်ကြည့်မှုအပေါ်အကူးအပြောင်းများနှင့်အိမ်မှာဖုန်းကိုစွန့်ခွာ။ မည်သည့်သံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေ့ရှိလျှင်, app ကိုတစ်ဥဩသံကင်မရာသုံးပြီးအချို့ဓါတ်ပုံကို ယူ. , သင်တစ်ဦးအကြောင်းကြားစာပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့သည့်အခါသငျသညျလုံခွုံရေးသို့မဟုတ်ရဲခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်, ဖြောင့်ကွယ်ပျောက်-ဥပမာအရေးယူနိုင်ပါသည်။
သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင်အမြဲသင်တို့နှင့်အတူရှိသည်သောအခြားမိုဘိုင်းဖုန်းရှိသည်။ သင်အဝေးမှအခြားဖုန်းမှဗီဒီယိုစီးကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြု, သင့် Monitor အတိုင်းဤသည်အခြားဖုန်းကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်ကကင်မရာဖုန်းကိုညာဘက်သင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာ, ထိုအခိုက်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်အရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအလွန်အဆင်ပြေမယ့်: သင်ဘယ်မှာပဲရှိရှိ, သင်သည်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုအမြဲသိကြပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းစောင့်ကြည့်မှုကိုသက်ဝင်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားရန် option ရှိသည်, သို့မဟုတ်အဝေးမှ app ကို setting များကို-အားလုံးပြောင်းလဲသွား။
မိုဘိုင်း device ကိုရဲ့အဓိကကင်မရာသို့စ front-facing ကင်မရာသုံးပြီး 1) ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်။
2) လှုပ်ရှားမှုထောက်လှမ်း။ အဆိုကို detector ရဲ့ sensitivity ထိနျးခြုပျဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် settings ကို။
မိုဃ်းတိမ်ကိုသိုလှောင်မှုမှဓါတ်ပုံများ၏ 4) လွှတ်တင်ခြင်း။
နှိုးဆော်သံ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ 5), ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ attachment ပါကအီးမေးလ်သတိပေးချက်။
နှိုးဆော်သံ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ 6), ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားဖြင့်အကြောင်းကြားစာ။
ထိုရက်သတ္တပတ်၏ကွဲပြားခြားနားသောနေ့ရက်ကာလအဘို့အချိန်ဇယားစောင့်ကြည့်၏ 8) ဖန်ဆင်းခြင်း။
9) သင့်သည်အခြားဖုန်းမှအဝေးမှကွန်နက်ရှင်။ အင်တာနက်ကိုကျော်ဝေးလံသောအမြင်။
ဤသည်လုံခြုံရေးကင်မရာ app ကိုထိရောက်စွာအောက်ပါလုပ်ငန်းများကိုကိုင်တွယ်:
1) အမှားပွုခွငျးအားဖွငျ့ entry ကိုမှသင်၏နေအိမ်ကာကွယ်ပါ;
2) သင့်ရုံး, ဆိုင်သို့မဟုတ်ဂိုဒေါင်ကာကှယျစောငျ့ရှောကျ။
4) (ကလေးမော်နီတာ, ကလေးနှိုးဆော်သံ function ကို) သင့်ကလေး Watch ။
5) သေချာသက်ကြီးရွယ်အိုများ OK ကိုဖြစ်ကြသည်လုပ်ပါ။
6) (အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မော်နီတာ) သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအပေါ် tabs များထားပါ။
မူလစာမျက်နှာမျက်လုံးစျေးကြီးတွင် CCTV စနစ်များကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်နှင့်မဆိုအထူးကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာဗီဒီယိုစောင့်ကြည့် app ကိုကျွမ်းကျင်နှင့်ကစတင်သုံးစွဲဖို့သင်ပိုမိုထက်ငါးမိနစ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မူလစာမျက်နှာမျက်လုံးလူတိုင်းလက်လှမ်းလုံခြုံရေးအသစ်တစ်ခုအဆင့်ပါ!
မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ - ပင်မစာမျက်နှာမျက်လုံး
20.08 ကို MB
မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ Apps ကပ
အဆိုပါထိပ်တန်း Download ...